Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Dowlada Puntland oo bilowday Sixiddii imtixaanka Dugsiyadda sare ee Puntland. | puntlandi.com
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Dowlada Puntland oo bilowday Sixiddii imtixaanka Dugsiyadda sare ee Puntland.
Garowe (Puntlandi) Waxaa si rasmi ah loo bilaabay sixida imtixaanka 30 bishii jun waxaana ka qayb galay 162 Macalin oo kala ah 121 Saxaayaal, 13 Hubiyaal, 28 horjogayaal iyo Masuuliyiinta Xafiiska imtixaanka.
Sanadka ayaa waxaa ku yimi dibi dhac balse samayn ku yeelan mayso ardayada xiligoodii natiida waa helayaan. Warqadu waxay martaa Saddex gacmood oo isticmaala Saddex Qalin oo kala duwan oo is hubinaya.
Dhamaan saddexdaas heer ee is- hubinta ah waxaa ka sii sarreeya kalkaaliyaal dul wareegaya oo hubinaya dhamaan xaashiyada imtixaanka.
Waxaa kalo agaasamaha imtixaanku hanbalyo shaqo adkaysi u diray macalimiintii imtixaanka saxaysay oo yiri waxay qabanyaan shaqo adag oo awood iyo karti ku jirto ilahayna ajarr iyo Xasnaad ha ka siiyo shaqada ay qabanayaan.